🥇 ▷ Faahfaahinta iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max ayaa la sifeeyaa ✅
Faahfaahinta iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max ayaa la sifeeyaa
Sidii ay u dhacday sannadihii ugu dambeeyay, ka hor inta aan si rasmi ah loosoo bandhigin casriga, faahfaahinteeda waxaa lagu shaandheeyay internetka toddobaadyada ka hor dhacdada. Munaasabadan, waxay horey u shaaciyeen waxay noqon lahaayeen faahfaahinta gaarka ah ee iPhone 11, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max waxa Apple si rasmi ah u soo bandhigi doontaa 10-ka Sebtember.
Apple waxay raaci doontaa qaabkii loo soo bandhigay sanadkii la soo dhaafay, sidaa darteed waxay bilaabaysaa seddex taleefanno isla mar ah isla markaana kala duwanaansho yar u leedahay faa’iidooyinka iyo qiimaha labadaba.
Kuwani waxay noqon doonaan qeexitaanka iPhone 11 iyo shirkadda
iPhone 11, ugu dhaqaalaha iyo “aasaaska” saddexda
IPad 11 wuxuu noqonayaa qofka badalaya ee iPhone XR; Tani waa marinka ugu xiisaha badan marka loo eego walaalihiis. Waxay yeelan lahayd shaashad ah 6.1 inji iyo batariga 3,100mAh, oo macnaheedu yahay koror yar marka loo eego iPhone XR (2900 mAh).
Gudaha waxaa ku dari doona processor-ka cusub A13 waxa Apple ka bilaabi doona iPhone-ka cusub waxaana la socon doona kaydinta 64/256/512 GB in loo doorto isticmaale
Mid ka mid ah khilaafaadka ugu weyn ayaa noqon doona qaybta sawirka. IPhone 11 wuxuu la imaan lahaa labo kamaradood 12MP ku saabsan dhammaan saddexda nooc ee kale. Intaas waxaa sii dheer, ma noqon doonto mid la jaan qaadaya Appel Pencil oo ka duwan iPhone 11 Pro iyo Max.
IPad 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max, agabyada waa weyn ee cusub
Dhanka kale, waxaan ku xarayn karnaa labadan aaladood inay yihiin halyeeyayaashii saxda ahaa ee jiilka cusub ee iPhones.
The iPhone 11 Pro waxay yeelan doonaan isla shaashaddii aan ku aragnay iPhone XS: OLED panel of 5.8 inji leh 3,190 mAh Bateriga awood u leh inuu qabto ku-dallacsiinta koronto la’aanta (sida Samsung Galaxy S10, tusaale ahaan).
Waxay sidoo kale isku dari doontaa A13 chip waana ku dooran karnaa 128, 256 ama 512 GB Kaydinta Gudaha
Dhabarka waxaan ka heli doonnaa seddex dareemayaal 12 MP (jaangooyooyin, telephoto iyo xagal ballaadhan) oo sida muuqata shaki ku jiri doono waa inuu hadlo (hadaadan adigu siinin hadda).
The iPhone 11 Pro Max, dhanka kale, waxay leedahay astaamo isku mid ah laakiin waxay kuxirantahay shaashad 6.5 inji iyo 3,500mAh Batariga.
Labaduba waxay la jaan qaadi doonaan Apple Pencil, iyagoo noqonaaya iPhone kii ugu horreeyay ee taageero u leh qalin-jabinta illaa iyo hadda ay si buuxda u isticmaaleen barnaamijka ‘IP Pro’.
Maxaa ku cusub dhammaan seddexda nooc
Waxaa laga yaabaa inay xiiso kuu yeelato: macruufka 13 ayaa kaliya la jaan qaadi doona iPhone-kaan
Intaa waxaa sii dheer, waxay umuuqataa taasi Apple waxay ka tagi doontaa teknoolojiyadda 3D Touch ee shaashaddooda oo aan ku bilaabi karno ficilada qaar iyadoo kuxiran cadaadiska aan sameynay markii aan ciyaareyno. Tan waxaa laga yaabaa inay kiciso taabashada tilmaanta, beddelato aalad aysan isticmaaleyaashu isticmaalin.
Markaas ayuu Wajiga hortiisa wuxuu yeelan doonaa xag aragtida weyn taas oo noo oggolaaneysa inaan si dhakhso leh u furno boosteejada ama adoo aan dooneynin inaan raadino booska markaan xoogga saareyno. Tani waxay noqon doontaa nidaamka furitaanka bayoolajiga kaliya tan iyo markii ay umuuqato in iPhone 11 cusub, Pro iyo Max ay shaashadaha aqriska ku hayaan.
Mana imaan doonaan iyagoo taageero ka helaya 5G; Sida ay sheegayaan wararka xanta ah, waa inaan sugnaa iPhone 2020 si aan ugu raaxeysano xawaaraha shabakaddan.